बलिउड / हलिउड Archives - Page 50 of 52 - Purbeli News
दुनियाँका सबैभन्दा महंगा १० सुन्दरी (फोटो फिचर)
विश्वका धनीहरुको मात्र चर्चा गर्ने विजिनेस म्यागजिन फोर्ब्सले दुनियाँका सबैभन्दा महंगा अभिनेत्रीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । हेर्नुस् को को परे उक्त सूचीमाः साण्ड्रा बुलकः ५१ मिलियन डलर – साण्ड्रा बुलक अहिलेकी बलिउडकी सबैभन्दा महंगी अभिनेत्रीमा दरिएकी छिन् । ५० वर्षकी साण्ड्रा अस्कर जित्ने चलचित्र ग्रयाभिटीबाट चम्केकी हुन् । जेनिफर लरेन्सः ३४ ...
यि हुन रियल लाइफमा बलात्कृत भएका अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । रियल लाइफमा अभिनेत्रीहरुसँग बलात्कार भएका धेरै घटानाहरु देखाइन्छन् । तर केही अभिनेत्रीहरु भने रियल लाइफमा नै बलात्कारको सिकार भएका छन् । केही यस्ता बलिउड अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जसले आफ्नो कालो बिगतको पर्दाफास गरेका छन् । बलिउडमा काम गर्ने सबै मानिसहरुको नियत सफा हुदैन भन्ने धेरैको भनाइ पनि यहाँ चरितार्थ हुन्छ । फिल्मका लागि काम दिलाइदिन...
बलिउड अभिनेता शाहरुख खान पक्राउ परेपछि भारतमा मच्चीयो हंगामा
काठमाडौं / बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई अमेरिकाको लस एन्जल्स एरपोर्टका सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएर छाडेका छन्। आफू हिरासतमा रहेको जानकारी दिँदै शाहरुखले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, म सुरक्षा अवस्थालाइ बुझ्न सक्छु र सुरक्षा जाँचको सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। तर, म अमेरिका आउँदा प्रत्येक पटक अध्यागमनको अपमान सहनुपर्छ। हिरासतमा रहेको बेला पोकेमोन गेम खेलेर ...
सोनाक्षी सिन्हा विवाह गर्ने तयारीमा !
के बलिउडकी दवंग नायिका विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकै हुन त ? बलिउडमा यस्तै हल्ला चलिरहेको छ । बलिउडलाइफडटकमले दिएको रिर्पोटमा सोनाक्षी सिंहा आफ्नो कथित बोइफ्रेण्ड सचदेवसँग विवाह गर्न तयारी गरेको बताइएको छ । सोनाक्षी र बन्टी पछिल्ला केही वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाधिने तयारीमा छन् । रिर्पोटका अनुसार...
‘बाहुबली-२’ आगमी वर्ष आउने, नयाँ कन्सेप्ट यस्तो छ ….
‘कटप्पा’ले बाहुबलीलाई किन मार्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजीरहेका दर्शकहरुको लागि ‘बाहुबली’को दोस्रो संस्करण आउने भएको छ। पहिलो फिल्ममै दर्शकको मन जितेर चर्चामा आएको बाहुबलीलाई फेरि फिल्मका निर्माताहरु फिल्मलाई भव्य रुपमा बनाउने तयारीमा लागिपरेका छन्। निर्माताहरुले बाहुबलीको अन्डरप्रोडक्सन भइरहेको जानकारी दिएका छन् भने दर्शकको आशातित अपेक्षालाई प...
बलिउडमा घरेलु हिंसाका घटना धेरै सुनिने गर्छन्। हालै मात्र टिभी शो नच बलिएको विजेता बनेकी दलजीत कौरले पतिसंग अलग्गिएपछि घरेलु हिसा गरेको भनी पति विरुद्ध केस गरेकी छिन्। दलजीत एक वर्षको छोरा सहित अहिले एक्लै बस्दै छिन्। उनी झै बलिउडका अरु पनि नायिका छन् जो पति वा एक्स ब्यावफ्रेन्डको पिटाइको सिकार भएका छन्। ऐश्वर्या राय बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चनले...
रनवीर र ऐश्वर्याका कारण बच्चन परिवारमा खैलाबैला
बच्चन परिवार बुहारी ऐश्वर्या राय बच्चनसँग रिसाएको खबर बाहिर आएको छ । करण जोहरले बनाउँदै गरेको फिल्म ‘ऐ दिल हे मुस्किलमा’ रनवीरसँग उत्तेजक दृश्य दिएका कारण बच्चन परिवार रिसाएको बताइएको छ । ऐश्वर्याले किसिङ सिन दिन नमानेपछि फिल्ममा रहेका किसिङ सिन हटाइएको बताइएको छ । तर स्क्रिप्टमा रनवीरसँग एउटा उत्तेजक दृश्य दिनुपर्ने माग भएपछि उनले उक्त दृश्य गरेक...
बेइज्जत हुने डरले यी अभिनेत्री गइनन् कार्यक्रममा
बलिउडमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी अभिनेत्री ज्याकिलन फर्नानडेजले फिल्म ‘ढिसुम’ को प्रोमोशन गर्न एक कमेडी सोमा जान अस्वीकार गरेकी छिन् । टिभी सो ‘कमेडी नाइट्स बचाओ’ जान उनी नमानेकी हुन् । एकपटक अनुभव सम्हाली सकेकी ज्याकलिनले पछिल्लो अनुभव अझै भुल्न नसकेका कारण पनि उक्त सोमा जान नचाहेको बताएकी छिन् । उक्त सोमा जो सेलिब्रिटी आएपनि कृष्ण अभिषेक त...
ऐश्वर्या रायमाथी अाक्रमण हुने सम्भावना बढेपछि बडीगार्डकाे संख्या दाेब्बर बढाइयाे
एजेनसी । बलिउड नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनले आफ्नो सुरक्षागार्डको संङ्ख्या दोब्बर गर्ने भएकी छिन्। अघिल्लो हप्ता एयरपोर्टमा फोटोग्राफरबिच भएको धक्का-मुक्का कारण ऐश्वर्याकी आमा वृन्दा राय घाइेते भइन। छोरी आराध्यालाई पनि चोट लागेछ। यो घटना पछि ऐश्वर्याले आफ्नो सेक्युरिटी गार्ड बढाउने फैसला गरेकी हुन। ऐश्वर्या आफ्ना ४ बडिगार्डसंग हिड्थिन। अब उनलाई ८ जन...
रजनीकांतको ‘कबाली’ ले तोड्यो सबै रेकर्ड, सलमान र आमिर पनि पछि परे
रजनीकान्तको फिल्म ‘कबाली’ ले रिलिजको पहिलो दिनमा नै ४० करोड रुपैया कमाइ गरेको छ । जुलाई २२ मा रिलिज भएको यस फिल्मले एक दिनमै ४० करोडको कमाइ गर्दै पुराना सबै रेकर्ड तोडेको छ । रजनीकांतको यस फिल्मले आमिर खानको फिल्म ‘पीके’ तथा सलमान खानको फिल्म ‘सुल्तान’को रेकर्ड तोडिदिएको छ ।आमिर खानको ‘पीके’ ले अमेरिकामा पहिलो दिनमा १४,१८,८१७ डलर कमाइ गरेको थियो ।...